á€±á€œá€¬á€€á€®á€”á€²á‚”á€±á€œá€¬á€€á€¯á€á±á€›á€¬á€á€¼á€²á€»á€á€¬á€¸á‚á€­á€¯á€„á€¹á€•á€«á€±á€…-[ á€†á€›á€¬á€»á€™á€á€¹á€±á€’á€«á€€á€¹á€á€¬á€á€ºá€…á€¹á€„á€šá€¹(á€’á‚†á€”) ]
ဗုဒ္ဓဘာသာအရ သစ္စာသိချင်ရင် ဆရာကောင်းလိုတယ် ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ် .. ..
ကျွန်တော်တို့ကျ ဆရာကောင်းက သေချာညွှန်ကြားလို့
* စိတ်ကိုလည်း အနိစ္စ ရှုတတ်တယ်
* ရှုဉာဏ်ကိုလည်း တည်ဆောက်တတ်တယ်
* စိတ်ချုပ်လျှင် ဓမ္မသဘာဝကို ရှုနိုင်တယ်ဆိုတာလည်း အသေးစိတ်သိတယ် ...
ဒါတွေက လက်တွေ့ရှုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မှ သိနိုင်တာပါ။ လက်တွေ့ မရှုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ လက်တွေ့ မသိနိုင်ဘူး။
လက်တွေ့ မရှုတဲ့အခါကျတော့ အခက်အခဲတွေ အများကြီး တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ – အခု လေ့လာတယ်သာ ပြောကြတာ လောကမှ လွန်မြောက်ရာ တရားကိုမပြောနဲ့၊ လောကကိုတောင် မသိဘူး .. .. မသိရတဲ့အကြောင်း – ကျွန်တော် မေးခွန်းတစ်ခု မေးပြမယ် .. ..
“စိတ်ဟာ ဘာလဲ ???” ပေါ့နော်
စိတ်ဟာဘာလဲဆိုတော့ အဲဒါ သူတို့သွားပြီ၊ မရှုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လည်း သွားပြီ၊ နားမလည်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လည်း သွားပြီ။ အဘိဓမ္မာတွေ လိုက်ကြတာလည်း သဘောတရား နားလည်ဖို့တော့လိုတယ်။
အဘိဓမ္မာတွေ လိုက်ပြီး လောကုတ္တရာ အကြောင်းမသိရင်လည်း သွားပြီ။ ဘာတံဆိပ်ကြီးပဲရရ လောကုတ္တရာ အကြောင်းကို မသိရင် အဘိဓမ္မာလိုက်တာ သွားပြီ။
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ လောကုတ္တရာမှ မသိတာကိုး .. .. လောကုတ္တရာ ဆိုတာကို နားမလည်ဘူး။ ဒီတော့လည်း ခက်တယ် ဗုဒ္ဓဘာသာ မဖြစ်သေးတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်စစ်ဆိုရင် လောကုတ္တရာဆိုတာ သိရမယ်။
လောကုတ္တရာဆိုတာ လောကမှ လွန်မြောက်တယ်ဆိုတာ အပျက်မှ လွန်မြောက်တာ။
လောကုတ္တရာတရား ကိုးပါးရှိတယ် - မဂ်လေးတန်၊ ဖိုလ်လေးတန်၊ နိဗ္ဗာန် – ဒါက လောကုတ္တရာ တရားတွေ လောကီမဟုတ်ဘူး။ လောကီဆိုတာ လောကနဲ့ယှဉ်တော့ ပျက်တယ်။ လောကုတ္တရာက မပျက်ဘူး။
ဒါလေးတောင် မသိဘဲ ရမ်းပြောဟောနေပြီး၊ ကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပစ်မှားစော်ကားနေကြတာ – သူတို့က ကံကြီးထိုက်မှာပဲ။ ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက သိလွန်းအားကြီးတယ် ဆိုပြီးဆွဲချချင်ကြတာ။
သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကို ရေးပြတယ် – ဒါကို ” ဟာ – နိဗ္ဗာန်က မြင့်ပါတယ်၊
ကကြီးရေက, က လုပ်ပါဦးတဲ့” ဆွဲချချင်ကြတာ။ နိဗ္ဗာန်က ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ပဲ ရေးရမှာ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းလည်း သိရမှာပေါ့။
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ လောကုတ္တရာပဲ၊ လောကရဲ့ လွန်ရာမှာရှိတာ ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က တွေ့တောင်ပြီးနေပြီ၊ သူတို့က အခုမှ နားတောင်မလည်သေးဘူး ဆိုတော့၊ အဆင့်က တော်တော်လေးကို ကွာနေတယ်။
ဒီတော့လည်း ရမ်းပြီးတော့ ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အပုပ်ချပြီး တောင်ပြောမြောက်ပြောနဲ့ ကိုယ့်လူတွေကို စည်းရုံးပြီး အတင်းပြောနေတာ။
ဒါပေမယ့် ကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အေးအေးပဲ၊ အေးထိုးနေတာပဲ။ ကိုယ်ကျင့်တဲ့အတွက် စိတ်ကိုလည်း ချုပ်အောင်ရှုနိုင်တယ်၊ ဓမ္မသဘာဝလည်း ချုပ်အောင်ရှုနိုင်တယ်၊ ချုပ်တဲ့အခါမှာ ချုပ်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်က “ကိလေသေ မာရန္တော နိဗ္ဗာနံ ဂစ္ဆတီိတိ မဂ္ဂေါ” ပါပဲ။
ဒီထက် အကျယ်ချဲ့ပြောရရင် “စတုမဂ္ဂဉာဏေန သစ္ဆိကာတဗ္ဗံ မဂ္ဂဖလာန မာလမ္ဗဏဘူတံ” ဆိုတာ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်က နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုကြတာ ထုံးစံပါပဲ။
ဒီတော့ “ရှေ့ကဖြစ်ပျက် နောက်ကမဂ်” ဆိုတဲ့စကားက အင်မတန် အဖိုးတန်ပါတယ်။
ဖြစ်ပျက်ကို မဂ်နဲ့လိုက်လို့ – မဂ်က ဖြစ်ပျက်ကို ဆုံးအောင်ရှုနိုင်ရင် – ဆုံးအောင်ရှုနိုင်တဲ့ မဂ်က ဖိုလ်ကူးပြီး – ဖိုလ်က ဖလသမာပါဒ်ဝင်စားရင် နိဗ္ဗာန်ကို ထိုးထွင်းသိတာ။
နိဗ္ဗာန်မှာ ဘာတွေရှိတယ် ညာတွေရှိတယ်ဆိုတာကို သူတို့က မပြောတတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျင့်မှ မကျင့်ဘဲ။
နိဗ္ဗာန်မှာ (၃၁)ဘုံမှာ ရှိတာမျိုး မရှိဘူး။ (၃၁)ဘုံမှာ ရှိတာမျိုး နှိုင်းခိုင်းစရာ ဥပမာ ထပ်တူထပ်မျှ နိဗ္ဗာန်မှာ မရှိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ နိဗ္ဗာန်က လောကုတ္တရာကိုး။ သူတို့က နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးတော့ လောကီထဲမှာပဲ ကျင်လည်ကျက်စားပြီး သူတို့ ဦးနှောက်ဟာလည်း လောကီနဲ့ပဲ ယှဉ်နေတာ။
လောကုတ္တရာ ဆိုတာကို နားမလည်ဘူး .. .. လောကဥတ္တရာဆိုတာ လောကမှ လွန်မြောက်တယ်၊ အပျက်မှ လွန်မြောက်တဲ့ ဓာတ်ကြီးက ရှိတယ် … .. နိဗ္ဗာနဓာတ်၊ အသင်္ခတဓာတ် ဆိုတာ မပြုမပြင် မစီရင်ထားတဲ့ ဓာတ်ကြီး။
မြတ်စွာဘုရား စတင်ပြီး တွေ့ရှိတော်မူခဲ့တဲ့ နိဗ္ဗာနဓာတ် မြတ်သောတရားကြီးဟာ – အစမရှိ အလယ်မရှိ အဆုံးမရှိ အင်မတန် အေးငြိမ်းတဲ့ ဓာတ်ကြီးဆိုတာ နားမလည်ကြပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဆရာကောင်း သမားကောင်း တွေကတော့ မိန့်တယ် – နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ချမ်းသာခြင်းမျိုးစုံ စုပုံနေတယ်၊ လွတ်မြောက်ခြင်း ရှိတယ်၊ (၃၁)ဘုံက ဆင်းရဲခြင်းမျိုးစုံ စုပုံနေတာ .. .. ဒါတွေကို ခွဲခြား နားမလည်ဘဲနဲ့ ကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲ “ငါတို့တောင် မတတ်တာ၊ ဒင်းတို့လည်း မတတ်ရဘူး” လို့ ဇွတ်ကြီးငြင်း နေတော့လည်း တကယ့်ပညာရှိ အလယ်မှာ ဟာသဖြစ်နေတယ်။
တော်တော်လည်း ပျက်ရယ်ပြုစရာ ကောင်းနေတယ်။ တော်တော်လည်း မလိုတမာ စိတ်ရင်းက ပေါ်နေတယ်။ လူတွေက ဦးနှောက်ရှိပါတယ် – စဉ်းစားလာကြမှာ၊ စဉ်းစားလာလို့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရင့်ကျက်လာရင် တစ်ပါးသူကို မနာလိုလို့ အပြစ်ပြောနေတယ် ဆိုတာကို ပေါ်တင်ကြီး ထင်ရှားလာလျှင် – သူတို့ တပည့်တွေက သူတို့ကို ပြန်ဝေဖန်လိမ့်မယ် -
“ငါတို့ ဆရာတွေဟာ တော်တော် ယုတ်ညံ့သေးတာပဲ၊ တော်တော်ကို အဆင့်နိမ့်တာပဲ၊ သူများကို အပြစ်သာ ပြောနေတာ တို့ဆရာတွေက ဘာမှ မဟုတ်ပါလား? “ ဆိုပြီး
သူတို့ တပည့်တွေက ဝေဖန်လာမယ်။ အဲဒီခေတ်ကို ရောက်လာမှာပဲ .. .. လူတွေဟာ အသိပညာဉာဏ်နဲ့ ရှင်သန်နေတာ လက်တွေ့ခေတ်ကြီးမှာ ဒီလို တစ်ပါးသူကို မတရား ပြောနေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ နောက်လိုက်တွေက သူတို့ကို မကြည်မညို ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် – တို့ဆရာဟာ တကယ်တမ်းကျ သူများအတင်းပဲ ပြောနေတယ်၊ မဟုတ်မတရားတွေလုပ်ကြံပြောနေတာ တကယ်တော့ လူယုတ်မာကြီးပဲလို့ မြင်လာမယ် .. .. အဲဒီ ခေတ်ကို စောင့်ကြိုပါ့မယ်၊
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လူတွေအားလုံး အသိပညာဉာဏ် ပွင့်လင်းပြီးတော့ အမှန်တရားကို ရဲရဲရင့်ရင့် လိုက်စား လေ့လာ ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ပဲ ဆန္ဒပြုရုံရှိတာပဲ .. ..